विदेशी मुद्रा साट्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको विनिमयदर – khabartime
विदेशी मुद्रा साट्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको विनिमयदर
५ आश्विन २०७६, आईतवार ०८:५४ 38 पटक हेरिएको
काठमाडौं – शनिबार नेपाली बजारमा धेरैजसो सबै देशको मूल्य घटेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ २१ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ११३ रुपैयाँ ८१ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै एक कुवेती दिनारको खरिददर ३७२ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३७४ रुपैयाँ ८१ पैसा तोकिएको छ ।
त्यसैगरी आज एक साउदी रियालको खरिददर ३० रुपैयाँ १८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३४ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १४१ रुपैयाँ ६५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १४२ रुपैयाँ ४० पैसा तोकिएको छ। आज एक बहराईन दिनारको खरिददर ३ सय रुपैयाँ ३० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय १ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै एक कतारी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ २५ पैसा तोकिएको छ।त्यसैगरी आज एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २७ रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २७ रुपैयाँ २९ पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै एक युएई दिरामको खरिददर ३० रुपैयाँ ८२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ९८ पैसा तोकिएको छ।
गरे के हुदैन नेपालमा?
सुजुकीको वातावरणमैत्री हाइब्रिड कार
अबदेखि नयाँ नियम्,तपाईले कति
श्री एयरलाइन्सको अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा
पोखरामा भित्रिएको आलुमा विषादी
वीरगञ्जको तेल उद्योगमा आगलागी